Kayseri wuxuu noqon doonaa Sanadka 2020 Maalgashiga iyo Dalxiiska | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriKayseri wuxuu noqon doonaa Sanadka 2020 ee Maalgashiga iyo Dalxiiska
10 / 01 / 2020 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
waxay noqon doontaa sanadkii maal gashiga iyo dalxiiska ee kayseri
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, wuxuu shir jaraa'id ku qabtay Erciyes. Kulankaas, Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu qiimeeyay sanadka 2019 wuxuuna siiyay macluumaad ku saabsan maalgashiga la sameyn doono 2020. Duqa Magaalada Büyükkılıç wuxuu cadeeyay inay magaalada ku soo biirinayeen 2019 bilyan 3 milyan TL ah sanadka 149 isla markaana ay ku tabaruceen 1 bilyan TL Kayseri. Isagoo caddeeyay inay jecel yihiin adeegga iyo Kayseri, Memduh Büyükkılıç, 2020 wuxuu noqon doonaa sannadka maalgashiga iyo dalxiiska, ayuu yidhi.
3 Bilyano 149 KHILAAFKA MILLION
Shirka jaraa’id Maalgelinta iyo howlaha Memduh Büyükkılıç ee 2019 wuxuu ku bilaabay baaritaanka filimka. Sanadka 2019, waxaa lagu nuuxnuuxsaday in ku biirinta dawlada hoose ee magaaladu ay gaartay 3 bilyan 149 milyan TL iyo tabaruca gobolka ee 1 bilyan oo TL ah. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu xooga saarey Wez Waxaan jaceyl u qabnaa magaaladeena oo xayeysiinta adeegga ayaa laga muujiyay filimka ku saabsan waxqabadka sanadka 2019. Xarunta Dhaqanka iyo Farshaxanka, hilqado cusub oo lagu dari doono jidadka tareenka, Terminal Storey Junction, Isbitaalka Magaalada Strey Junction oo qeybta afaraad lagu daro, Wadooyinka Isku xirka Derevenk Viaduct, Marxaladda koowaad ee 15-ka Luulyo Boulevard, dib u cusbooneysiinta boulevards, diyaarinta isgoysyada, marinnada dadka lugeynaya, wareejinta tas-hiilaadka lagu bixiyo gaadiidka dadweynaha, Xarunta Xerada Sare ee Erciyes, si ay u keento dalxiiska buufinnada Kayseri, daraasadaha dalxiiska caafimaadka si dib loogu soo nooleeyo, daraasado la xiriira dalxiiska caloosha, Mustafa Kumlu Ulu Cinarlar Waayeelnimada Nolosha iyo Wadajirka Xarun, Yüksel Ateş Barrier-Free Children House, abuurida Golaha Dhalaanka ee Magaala Weyn, dadaallada lagu hormarinayo qiimayaasha Kayseri, matxafyada iyo mashaariicda lagu sameeyay in Kayseri laga dhigo magaalada matxafyada, maktabadaha casriga ah, buuggaagta wax lagu qoro ee Carwada Buuggaagta, kaabayaasha KASKİ Maalgashi, 9 milyan oo maalgashi TL ah degmooyinka 120 bilood gudaheeda, e38, halkaas oo badeecadaha gacanta lagu sameeyo iyo waxyaabaha xafladaha lagu dalacsiin doono laguna iibin doono jawiga elektarooniga ah, Akadeemiyada Farshaxanka waxay bilaabeen inay u adeegaan, Masraxa Gobolka in la keeno Kayseri, Dharka dharka iyo Xarunta qallajinta. korjoogteynta iyo dardargelinta mashaariicda Kayseri iyadoo lala kulmayo wasiirrada iyo xafiisyada xafiisyada, gaar ahaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Besime Özderici Barrier-Free Life Centre, Xarunta Bulshada ee Beyaz Beehir oo loo furay adeegga, waxqabadka Spor A.Ş. Anatolia xagga waxbarashada sumadda, KAYMEK iyo Genç KAYMEK, hoolka isboortiga ee laga dhisay Köşk Neighborhood, guryaha lagu dhisayo Wadooyinka Waaweyn, dib u cusboonaysiinta ayaa ka shaqeeya ünönü Park, dhismaha adeegga labaad ee Waaxda Dabka, shaqooyinka Xarunta Sayniska iyo Farshaxanka labaad, oo laga sii wado Kayseri Neighborhood. Howlaha dib u soo celinta, qodista Kültepe iyo Keykubadiye Palace ayaa si faahfaahsan loo sharxay.
“HA JOOJIN ROO LEE”
Shaqada ka dib 2019, Duqa Magaalada Caasimadda, oo u yimid garoonka si uu u soo bandhigo ku saabsan maalgashiga la sameyn doono 2020. Memduh Büyükkılıç wuxuu ku bilaabay khudbadiisa isagoo u rajeeyay afarta ciidan ee lagu dilay Aaga Howlgalka Nabadda. Duqa Memduh Büyükkılıç wuxuu cadeeyay inay u shaqeeyaan Kayseri habeen iyo maalinba dhaqanka wadajirka iyo wada jirka wuxuuna yiri, Orum waan u mahadcelinayaa qofkasta oo naga soo shaqeeyey Kayseri ilaa iyo hada. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Madaxweynaheenna iyo kooxdii aan waligood naga tagin. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo xubnaha saxaafadda oo had iyo jeer ku dadaala sidii ay magaaladeena qurxoon loogu xasuusto. ” Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu cadeeyay inay ku shaqeynayaan fahamka barnaamijka 'tamam' hakinin orodka 'iyo inay tahay qofkasta inay tahay waajibaadka ah inay udhaqaaqaan magaalada oo mustaqbal wanaagsan ubadkeena. Duqa Magaalada Büyükkılıç wuxuu yiri, Cen waxaan ugu tageynaa niyad wanaag maxaa yeelay ilaah kali ma tihin. Başkan wuxuu yiri in dhaqan degmo muhiim ah laga sameeyay Kayseri 25 sano iyo in kooxda khibrada leh ee dawlada hoose ee Kayseri ay shaqeeyaan habeen iyo maalinba.
“2020 SANSANKA iyo SANADKA SAFARKA WAA INUU YAHAY”
Isagoo cadeeyay inay sii shaqeyn doonaan sanadka 2020, Madaxweyne Memduh Büyükkılıç, sanadkaan wuxuu noqon doonaa sanadka maalgashiga iyo dalxiiska, ayuu yiri. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu cadeeyey inay bartilmaamedyo istiraatiiji ah u dhigeen sanadka 2020 isla markaana ay hogaamin doonaan sameynta iyo howlgalka Golaha Dalxiiska Gobollada. ayaa sheegay inay isku dayi doonaan inay kordhiyaan.
Isagoo hoosta ka xariiqaya waxa lagu qaban doono cinwaanka Kaabayaasha iyo Waxbarashada Erkilet Airport, isagoo tixraacaya dadaalka Madaxweynaha Büyükkılıç, qandaraaska waxaa la qaban doonaa rubuc ugu horeysa sanadka, ayuu yiri. Isagoo cadeeyay dadaalada loogu tala galay in gaadiidka loogu sameeyo Kayseri Duqa magaalada B comfortableyükdılıç Madaxweynaha Memduh Büyükkılıç, hoteelada waxsoosaarka dhulka, shaqada hoyga ee kor u qaadida shaqada, shaqaalaha dalxiiska iyo hagida shaqada ayaa qaban doona, ayuu yiri.
Xarunta Xerada Sare ee Erciyes High Altitude Camp sidoo kale waxay ka hadashay Madaxweynaha Büyükkılıç, sanad walbo ugu yaraan 100 koox kubada cagta ah ayaa damacsan inay sameystaan ​​xerada, ayuu yiri. Duqa magaalada Büyükkılıç ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in sanadka 2019, 17 kooxo baaskiil wadato oo ka kala socda 43 wadan ay degen yihiin magaalada Erciyes.
Duqa Memduh Büyükkılıç, Bandhigga caloosha, Bandhiga Dalxiiska Jiilaalka ee Erciyes, Erciyes Half Marathon iyo sidoo kale bixinta macluumaadka ku saabsan maalgashiga abuuri doona kaabayaasha dalxiiska sida dib u soo celinta Kültepe, matxafka kiniiniga, marxaladda labaad ee Kayseri Neighborhood, matxafyada loo arko in ay yihiin magaalada matxafyada. Wuxuu kaloo sheegay inay abaabulayaan xaflado sida Folk Run iyo Pastırma Festival. Duqa magaalada Büyükkılıç ayaa ka waramay mashaariicda ay ka qaban doonaan qiimeynta qiimayaasha Kayseri, waxay muhiimad weyn ku yeelan doonaan dhiirrigelinta Mimar Sinan, waxay u shaqeyn doonaan midowga Magaalooyinka Sinan, USHAŞ waxaa laga furi doonaa Kayseri dhanka dalxiiska caafimaadka, sumadaynta iyo howlaha dallacsiinta ayaa diiradda lagu saari doonaa.
Duqa magaalada Memduh Büyükkılıç wuxuu u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysan doonta maalgashiga iyo howlaha la sameyn doono sanadka 12, kaasoo uu ku sharraxay 2020 cinwaan oo waaweyn iyo boqolaal hoosaad, wuxuuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyey ereyada Cen waxaan u mahad celinayaa Ilaaha Qaadirka ah, kaasoo awood noo siiya inaan Kayseri ugu adeegno Calanka Dayaxa ee Dayaxa ”.
Sarikamış Maalgelinta waxay noqon doontaa Xarunta Dalxiiska ee Gobolka
Goobta dalxiisku waxay u furan yihiin dalxiisayaasha dooxada dalxiiska ee Akxehir
Kayseri wuxuu noqday magaalo dalxiis
Khadka dalxiiska ee u dhexeeya Antalya - Konya - Kayseri
Dalxiiska Erzurum ka hor xilliga Jiilaalka
Buuraha Ağrı waxay noqon doontaa Janno Dalxiis oo leh dhismaha hoteelada iyo fiilooyinka fiilooyinka
Xarunta Dalxiiska Cimilada Cimilada Cimilada waxay noqon doontaa Model Model for Konya
Buundada Roobku waxay noqon doontaa Xarunta Dalxiiska ee Baabuurta iyo Gawaarida
Mersinde Dalxiiska 12 ayaa ku noolaan doonta bisha
Guddoomiyaha Balanliogle: Qaraxii Dalxiiska ee Ordu Madaarka
Dalxiiska Ordu wuxuu noqon doonaa 12 Moon ... Kabtanku wuxuu shaqeyn doonaa ilaa Saacadaha Saacadaha
Mashruuca Gaadiidka Mega ee 2020 ee Istanbul oo ah musharax loogu talagalay Olombikada 2020
Bandhiga Dalxiiska Jiilaalka Erciyes
Marathon Half Erciyes iyo Jinsi Dadka
Balaadhinta Madaarka Erkilet